हेल्थपोस्ट एक्सक्लुसिभः १२ औं तहको बढुवाका लागि डा. यादव पहिलो नम्बरमा, पाँचौंमा पुगे डा. लोहनी – Health Post Nepal
हेल्थपोस्ट एक्सक्लुसिभः १२ औं तहको बढुवाका लागि डा. यादव पहिलो नम्बरमा, पाँचौंमा पुगे डा. लोहनी
२०७८ कार्तिक २९ गते १३:४३
काठमाडौं–स्वास्थ्य सेवातर्फको प्रमुख विशेषज्ञ (१२औं तह) को रिक्त पदमा हुने भनिएको बढुवाको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। बढुवाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्न आजै बढुवा समितिको बैठक बस्दैछ।
बढुवाका लागि हाल स्वास्थ्यसेवामा ११औँ तहमा कार्यरत विशेषज्ञमध्ये करिब २१ जनाले आवेदन दिएका छन्।
प्रतिस्पर्धामा को अगाडि?
बढुवा समितिको बैठकले तीन वटा रिक्त पदका लागि पाँच जनाको नाम सिफारिस गर्ने छ। हेल्थपोस्टलाई प्राप्त सूचनाअनुसार कार्य सम्पादन र दुर्गम बसेको आधारको मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा डा. श्यामसुन्दर यादव सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन्। यादव हाल भेरी अस्पतालका सर्जन हुन्। उनले त्यहाँ दुई पटक प्रमुखको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका छन्।
त्यसैगरी, योग्यताक्रमको दोस्रो नम्बरमा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. भीमसिंह तिंकरी परेका छन्। तेस्रो नम्बरमा डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र चौथोमा संगीता मिश्रा परेका छन्। डा. मिश्रा प्रसुति अस्पतालकी प्रमुख हुन्।
पाँचौं नम्बरमा डा. गुणराज लोहनी परेका छन्। उनी योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख छन्।
यसअघि वरिष्ठताका आधारमा डा. लोहनी पहिलो नम्बरमा थिए। तर, दुर्गम बसाईको नम्बर जोड्दा उनी पाँचौंमा परेका छन्।
पहिला वरिष्ठतामा रहेका डा तारा पोखरेल भने कार्य सम्पादन र दुर्गम बसेको आधार नम्बर जोड्दा सूचीबाट ‘आउट’ भएका छन्। वरिष्ठताका आधारमा डा. कृष्ण पौडेल अगाडि भए पनि दुर्गम बसाईको नम्बर जोड्दा डा. मिश्राले उछिनेकी छन्।
तीन जनाको बढुवाका लागि समितिले कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधार, ज्येष्ठता, भौगोलिक क्षेत्रमा काम र शैक्षिक योग्यता र तालिमबापत अंक दिई ५ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछ। सोमध्येबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३ जनालाई बढुवा गर्नेछ।
१२औँ तहका तीन वटै पदको पूर्ति कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ११औँ तहमा कार्यरतमध्येबाट बढुवामार्फत् गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायमा १२औं तहको तीन वटा पद रिक्त छ। जसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दुई विशेषज्ञ पद र वीर अस्पतालमा एक पद खाली छ।